Dawladda Turkiga oo xanibtay Barta Youtube - Somaliland Post
Home News Dawladda Turkiga oo xanibtay Barta Youtube
Dawladda Turkiga oo xanibtay Barta Youtube
Turkiga (SLPOST) Dowladda Turkiga ayaa xirtay oo aan wadankeeda laga isticmaali Karin barta Youtube oo la isku dhaafsado muuqaalada isla markaana qayb ka ah baraha dadweynaha aad u isticmaalan.
Talaabadan ayaa timid maalin kadib markii maxkamad ku taalla isla Turkiga xukuntay in xanibaada barta twitterka oo todobaad kahor laga joojiyey isticmaalkiisa.
Joojinta isticmaalka Youtube ayaa timid kadib markii lasoo geliyey cod si sir ah loo duubay oo ah shir ay yeelanayeen saraakiisha milateriga ee Turkiga. Shirka ayaa ku saabsanaa sidii talaabo milateri looga qaadi lahaa Syria.
Ra’iisul Wasaare Erdogan oo beriyahan ku jiray olole doorasho ayaa ku eedeeyay baraha dadweynaha in lagu faafiyey warbixino aan jirin oo ka dhan Turkiga.
Khuburo ayaa sheegaysa in laga yaabo talaabada xigta ay noqon doonto xakinta ama joojinta isticmaalka barta Facebook.
Dowladda Turkiga ayaa xayiraad saartay isticmaalka adeega laga daawado muuqaalada ee loo yaqaano Youtube, todobaad kadib markii Maxkamada dalkaas ay amartay in la mamnuuco isticmaalka barrta Twitter-ka.
Ra’iisul Wasaaraha Turkiga Recep Tayyib Erdogan ayaa taageeray xayiraada la saaray Barta Twitter-ka oo ay aad u isticmaalaan dadweynaha reer Turkiga, iyadoo tallaabadan ay aad uga soo horjeesteen dadka ka soo horjeeda siyaasada dowladda.
Shirkada Isgaarsiinta ee dalka Turkiga ayaa mamnuucday isticmaalka barta Youtube, waxaana la ogaaday in bartan la xiray.
Barta Youtube ayaa waxaa la soo dhigay cod la sheegay inay ahaayeen Ra’iisul Wasaaraha Turkiga iyo wiilkiisa oo ku wada sheekeysanayay lacago la musuq maasuqo.
Sidoo kale goor hore waxaa la soo dhigay bartaas cod laga duubay saraakiil Turki oo ka wada hadlaya arrimaha Suuriya, waxaana ay aheyd dood ku saabsan suura galnimada howl galo laga fuliyo gudaha Ruushka, waxaana doodaas ka qeyb galay Madaxa sirdoonka, Wasiirka arrimaha dibada Turkiga iyo Taliyaha ciidamada qalabka sida.
Ra’iisul Wasaare Erdogan oo wajahaya maalinta Axada ah doorashooyinka dawladaha hoose ee muhiimka ah, ayaa ku eedeeyay baraha bulshada ay isticmaasho in lagu faafinayo warar been ah, wuxuuna goor hore soo jeediyay in la dhaqan galiyo xayiraado lagu soo rogo YouTube iyo Facebook.
Xayiraadaha dowladda Turkiga ku soo rogeyso baraha Bulshada ayaa ka dambeysay, kadib markii sanadkii hore dalkaas ka dhaceen dibad baxyo ka dhan ah dowladda, waxaana jira mucaarado weyn oo ay la kulmeyso dowladda Mr Erdogan.